Hindiya waxay dooneysaa in Boqortooyada Midowday ay ka takhalusto karantiil dadka Hindida ah ee la tallaalay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Hindiya waxay dooneysaa in Boqortooyada Midowday ay ka takhalusto karantiil dadka Hindida ah ee la tallaalay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Xeerka, oo waajibinaya 10 maalmood oo gooni-u-goosad ah oo loogu talagalay dadka safarka ah ee ka imanaya Hindiya, ayaa sidoo kale quseeya dalal kale oo badan oo adeegsanaya Covishield, oo ay ku jiraan kuwa Afrikaanka ah badankood.
Soo-booqdayaasha si buuxda looga tallaalay Hindiya ayaa weli looga baahan yahay inay tagaan karantiil-maalmeedka 10-maalmood ee COVID-19.
Tallaalka Covishield waxaa si wadajir ah u soo saaray Jaamacadda Oxford iyo AstraZeneca waxaana soo saaray Machadka Serum ee Hindiya.
Dadka British-ka ah ee UK ku tallaalay isla jab-yada Hindiya laga sameeyay looma baahna inay karantiiliyaan.
Boqortooyada Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay nasin doonto xannibaadaha faafa ee COVID-19 ee booqdayaasha ajnabiga ah ee si buuxda loo tallaalay laga bilaabo horaanta bisha soo socota.
Laakiin liiska waddamada leh tallaalada la oggolaaday kuma jiraan Hindiya, in kasta oo waddanku adeegsado nooc ka mid ah tallaalka AstraZeneca oo laga soo saaray UK, waxayna u keentaa xoogaa xasillooni darro siyaasadeed ah iyo hanjabaadyo aargoosi ah oo ka yimaada mas'uuliyiinta Hindiya.
Tallaalka Covishield, oo ay si wadajir ah u soo saareen Jaamacadda Oxford iyo AstraZeneca waxaana soo saaray Machadka Serum ee Hindiya ee fadhigiisu yahay Pune, Boqortooyada Midowday ma aqoonsana sharciga cusub inkastoo ay farsamo ahaan la mid tahay qiyaasaha la siiyay malaayiin British ah.
The AstraZeneca tallaalka ayaa ka kooban inta ugu badan ee la siiyo Hindida ilaa maanta. Tiro yar ayaa qaatay tallaal wadaniga ah oo ay soo saartay Bharat Biotech, oo aan laga isticmaalin UK.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Hindiya ayaa ku boorriyay mas'uuliyiinta dowladda Ingiriiska '' xallinta hore ee arrinta karantiil '' oo ay la socdaan Hindida booqata United Kingdom weli waxaa laga rabaa in la karantiilo xataa haddii si buuxda loo tallaalo.
Xeerarka gelitaanka cusub, oo dhaqan galaya bisha Oktoobar, ayaa ka careysiisay dad badan oo Hindi ah, kuwaasoo go’aanka ku tilmaamay mid takoor ah. Dadka British-ka ah ee UK ku tallaalay isla jab-yada Hindiya laga sameeyay looma baahna inay karantiiliyaan.
Wasiirka arrimaha dibedda Subrahmanyam Jaishankar ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray maanta ka dib kulan uu kula yeeshay dhiggiisa Ingiriiska Liz Truss magaalada New York, halkaas oo labaduba ay uga qeyb galayaan Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Tallaabada Britain ayaa sidoo kale horseedi karta aargudasho ka timaadda New Delhi, iyadoo sarkaal ka tirsan dowladda Hindiya uu sheegay inay u badan tahay inay qaado tillaabooyin is -dhaafsi ah haddii arrinta aan si dhakhso ah loo xallin.
"Arrinta aasaasiga ah ayaa ah, halkan waa tallaal - Covishield - oo ah shey shati ka haysta shirkad UK ah oo laga soo saaray Hindiya oo aan shan milyan oo qiyaasood siinnay UK codsi ka yimid dowladda," Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Hindiya Harsh Vardhan Shringla ayaa wariyeyaasha ugu sheegay New Delhi.
Isagoo ku tilmaamay aqoonsiga Covishield "siyaasad takoor", wuxuu sheegay in wada-xaajoodyo ay UK kula jiraan shuruudaha cusub.
"Laakiin haddii aanan helin qanacsanaan waxaan ku jiri lahayn xuquuqdeena inaan ku soo rogno tallaabooyin is -dhaafsi ah."
Guddiga Sare ee Ingiriiska ee New Delhi ayaa sheegay in UK ay kala shaqeyneyso India xallinta arrinta.